Shimbir maroodi: sifooyinka, deegaanka, dhaqanka iyo in ka badan | Shabakadda Saadaasha Hawada
Jarmal Portillo | 16/11/2021 10:00 | Ciencia
El shimbir maroodi o Aepyornis waxay ka dhex muuqataa shimbiraha ugu waaweyn uguna xoogga badan caalamka, waxayna miisaankeedu yahay ilaa 500 kg (shan jeer gorayada) dhererkeeduna waa laba ilaa saddex mitir iyo badh. Ku noolaanshaha kaynta Madagascar. Waxay leedahay astaamo la mid ah kuwa gorayada casriga ah, laakiin muunadaha hidde-sidaha ee laga soo ururiyay ukumaha fosil waxay ku xidhaan kiwi. Ma jirto xog gaar ah oo ku saabsan goorta ay dabar go’day, balse waxaa la rumeysan yahay in imaanshaha bani’aadamka ee jasiiradda ay saameyn ku yeelan karto waayaheeda ku dhawaad ​​2.300 oo sano ka hor. Magaceedu wuxuu ka yimid tarjumaadda asalka ah ee "vouron patra", oo macneheedu yahay shimbir ama shimbir maroodi.
Maqaalkan waxaan kuu sheegi doonaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato shimbirta maroodiga, maxay yihiin sifooyinka iyo xiisaha.
1 Horumarka iyo taariikhda shimbirka maroodiga
3 Deegaanka iyo hab-dhaqanka shimbirka maroodiga
4 Xiisaha qaar
Horumarka iyo taariikhda shimbirka maroodiga
Waxaa lagu qiyaasaa in shimbiraha maroodigu ay abuurmeen 80 milyan oo sano ka hor oo ay gaadheen qiyaaso aad u badan taas oo ay ugu wacan tahay jasiiradaha waaweyn, tani waa geedi socod horumar leh, marka ay degaan jasiirado ama dhul ka fog halka ay markii hore ku noolaayeen, saamigoodu wuu kordhi doonaa.
Markii reer galbeedka ay yimaadeen Madagascar qiyaastii qarnigii XNUMXaad, waxay la yaabeen markay maqleen dadka maxalliga ah oo ka hadlaya shimbiraha kaymaha waaweyn. Dad yar ayaa rumaystay ilaa bartamihii qarnigii XNUMX-aad, markaasoo saddex ukun iyo lafo ka mid ah muunaddan la geeyey Paria.
Lafaha la helay xilliyo kala duwan ayaa soo taxnaa ilaa qarniyadii XNUMXaad iyo XNUMXaad. Waxaa kaloo la helay qolof ukun oo jira 1000 sano, natiijadiina waxay keentay in khubaradu ay qiyaasaan inay ku dhex jiraan aadanaha. Si kastaba ha ahaatee, taariikhda dabar goynta ayaa weli ah qarsoodi. Dadka qaar baa u haysta inay dhacday qarnigii XNUMXaad.
Lafoofka iyo luqunta shimbiraha maroodigu waxa ay aad ugu shabahaan ta gorayada, balse cilmi-baadhisyo dhawaan la sameeyay ayaa muujiyay in shimbirahani aanay lahayn xidhiidh awoowe. Miisaankeeda iyo cabbirkeeda ayaa ka dhigaya shimbirka labaad ee ugu dheer taariikhda, kaliya waxaa ka sarreeya Moas New Zealand oo sidoo kale dabar go'ay.
Shimbirkan waxa uu leeyahay lugo waaweyn oo xoog badan iyo ciddiyo waaweyn oo xoog badan. Si tartiib ah ayey u socotaa sababtoo ah uma baahna in ay gaarto xawaare aad u weyn sababtoo ah ma laha cadaw dabiici ah ilaa aadamuhu ka yimaado.
Ma duuli karo, laakiin waxa ay leedahay baalal waaweyn oo aan horumarin. Baalalkoodu waa dhumuc iyo tilmaame, oo aad ugu eg kuwa emu. Afkeedu waxa uu u qaabaysan yahay laabta oo kale. Ukunta shimbirka maroodiga waxay gaari kartaa dhexroor dhan hal mitir iyo hal dhererka 33 sentimitir, iyo meesha bullaacadaha waxay gaari kartaa ilaa 9 litir. Haddii la barbardhigo ukunta digaaga, waxay qaadan doontaa ilaa 200 oo unug si loo buuxiyo mid ka mid ah kuwan. Hal ukun oo shimbir maroodi ah ayaa quudin kara 120 qof.
Deegaanka iyo hab-dhaqanka shimbirka maroodiga
Shimbirkan maroodiga ah ayaa la sheegay inuu in ka badan 60.000 oo sano ku noolaa kaymaha bannaan ee Madagaskar, balse muuqaalkii ugu dambeeyay ee la diiwaan geliyo waxa uu ka dhacay kaynta dhiiqada leh ee jasiiradda. Waa shimbiro dhir-dhir ah. Waxay ku quudiyaan dhirta iyo miraha jasiiradda Madagascar, iyo sidoo kale tiro badan oo caleemo iyo laamo ah. Waxaa la aaminsan yahay in cuntadaada lagu daro midhaha dhirta Arecaaceae.
Waxaa jira aragtiyo kala duwan oo ku saabsan sababta keentay dabar goynta shimbirkan, laakiin dhammaan waxay isku raacsan yihiin in bani'aadamku dilay. Shimbirku waxa uu xukumayay jasiiradda muddo dheer. Waa shaki la'aan mid ka mid ah xayawaanka ugu waaweyn ee meesha oo dhan. Ma laha cadaw dabiici ah ama bahal ku filan oo ay ugaarsadaan.
Aragtida koowaad waxay sheegaysaa in dabar-goyntaasi ay dhacday qiyaastii 2.000 oo sano ka hor, iyo muuqaalka dadka ee jasiiradda ayaa calaamad u ah imaatinka ugaadhsiga ugu horreeya ee la tacaali kara shimbiraha. Baaxadooda oo aad u weyn awgeed, degayaashu waxay si cad u dileen sababtoo ah waxay ahaayeen isha cuntada ee dadweynaha. Sidaas oo ay tahay, aragtidu waxay qabtaa in dadkii ugu horreeyay ee jasiiradda degganaa aanay mas'uul ka ahayn waayitaankeeda, maaddaama diiwaannada ay muujinayaan in qaar badan oo iyaga ka mid ah ay badbaadeen.
Laakiin markii Carabtu ay soo gaadheen xeebaha Madagaskar, xaaladdu way ka sii dartay, sababtoo ah lama ugaarsan jirin, laakiin waxay burburiyeen buulkoodii si ay ukun u xadaan. Taas, waxay ka hortageen taranka shimbiraha. Qodobka ugu muhiimsan ee dabar goynta ayaa ahaa xaalufinta dhirta, taasoo keentay in la burburiyo guryahoodii.
Ugu dambayntii, xaalufka joogtada ah ee lagu hayo deegaanka buulkooda awgeed, xayawaankani waxay noqdeen kuwo dabar go'ay qarnigii 34aad. Si kastaba ha noqotee, dadka qaar ayaa ku adkaysanaya inay wax walba burburiyaan. Hadda oo kaliya ayaa la helay lafaha fosil iyo ukunta shimbiraha maroodiga. Qaar ka mid ah kuwa dambe waxay leeyihiin wareeg ah in ka badan hal mitir iyo dhexroor ka badan 160 cm. Si aan fikrad kuu siiyo, mugkeedu waxa uu ku dhow yahay XNUMX jeer ka ukunta.
Halyeeyga ayaa sheegay in markii Marco Polo uu soo maray Madagascar uu maqlay xanta shimbir weyn, taas oo keentay halyeyga shimbiraha Roc. Shimbirahan waaweyn waxa ay ku nool yihiin buuraha oo ay qoraayaal badan ku soo qaateen hawshooda. Gorgorka weyni wuxuu leeyahay awood weyn.
Ukunta shimbirka maroodiga ayaa ah tii ugu weyneyd ee abid la diiwaan geliyo, xitaa ka weyn kan dinosaurka. Ukun shimbireedka maroodiga ah ayaa la xaraashayaa sanadka 2015 qiyaastii €70.000. Da'diisu waa 400 oo sano.
Saynis yahano badan ayaa su’aal galiyay in shimbirka maroodiga la isku xidhi karo iyo in kale. Bani’aadamku mar haddii uu ciyaarayo doorkii Eebbe, marka hore waxa uu ku raaxaystaa in uu makhluuqa kale dabar go’o isaga oo aan miisaamin cawaaqibka ka dhalan kara. Dabadeed isku day inaad soo noolaato. Natiijadu wali way adagtahay in la xisaabiyo.
Waa iyada oo la helo astaanta DNA-da ee xayawaanka dabar go'ay in ay "soo noolayn karto." Sidee tan lagu dhammeeyay? Iyadoo loo marayo habka cloning, "hooyo ku meel gaadh ah" oo ka soo jeeda nooc kale oo isku qoys ah ayaa la adeegsadaa. Shimbiraha maroodiga, gorayada ayaa loo isticmaali karaa. Sidaa darteed, ha la yaabin haddii mustaqbalka dhow aad booqan karto meelaha uu Steven Spielberg u maleeyay Jurassic Park in aysan jirin wax xaasid ah. Marka laga hadlayo shimbiraha maroodiga, aan rajayno inay sii wataan caadooyinkoodii hore ee cunista.
Waxaan rajaynayaa in macluumaadkan aad wax badan ka baran karto shimbirka maroodiga iyo astaamihiisa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Ciencia » Shimbir maroodi